China Dual Motor Ergonomic Electric Height Adjustable Standing Desk Frame ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ | မင်မင်
Dual Motor Ergonomic Electric Height Adjustable Standing Desk Frame
4 Memory Button LCD Controller ပါရှိသော လျှပ်စစ်အမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သော Standing Desk Frame။
အစွမ်းထက်သော မော်တာနှစ်လုံး - ပိုမြင့်ပြီး airlift S3 ဖြင့် အောက်သို့ဆင်းပါ။ အပိုအပိုင်းသည် စားပွဲခုံအား 24.6လက်မအထိ နိမ့်ဆင်းစေပြီး 50. အမြင့်4လက်မအထိ အမြန် 1.5လက်မနှုန်းဖြင့် မြင့်သည်။
မန်မိုရီခလုတ်4ခုနှင့် LED Display - တစ်နေ့တာလုံး လွယ်ကူပြီး တသမတ်တည်း ချိန်ညှိနိုင်စေရန်အတွက် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော အမြင့်ဆက်တင်4ခုနှင့် အပြာရောင် LED အမြင့်ပြသမှုပါရှိသည်။
Ansi/BIFMA x5။5လိုက်လျောညီထွေ - လေးလံသောစတီးလ်တည်ဆောက်မှုနှင့် ချိန်ညှိနိုင်သော အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းခြေဖဝါးများသည် အမြင့်ဆုံးအလေးချိန် 264 ပေါင်အထိ ခံနိုင်ရည်အား မစွန့်ထုတ်ဘဲ တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။
71" အနံအထိ အံကိုက် - ဘောင်အကျယ်ကို 45" မှ 62" အထိ ချိန်ညှိပါ။ သင်ရွေးချယ်သည့် ထိပ်ပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် 9" ကျယ်ပါသည်။ ဖရိန်ကို MingMing Standing Desk Ergo table Top နှင့် beveled အောက်ခြေအနားများ၊ 54" X 30" အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
လှုပ်လှုပ်ရွရွမဖြစ်ဘဲ ခိုင်ခံ့သောခြေထောက်များ - အပိုင်း ၃ ပိုင်းကို မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း စတီးလ်ခြေထောက်များသည် ပြိုင်ဖက်2ပိုင်း ခြေထောက်ခုံများထက် နိမ့်သွားပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည် လွယ်ကူသည်၊ လိုအပ်သောကိရိယာများပါ၀င်သော မိနစ်။
လေယာဉ်ပျံဖြင့် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါ - အထိုင်များသော အပြုအမူသံသရာကို ဖြတ်ပြီး ထိုင်-မတ်တပ် စားပွဲခုံ၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားလိုက်ပါ။ သင်အလုပ်၊ စာကျက်ချိန်နှင့် ဂိမ်းကစားနေစဉ် မတ်တပ်ရပ်ကာ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး ခြေထောက်နှင့်ခြေများကိုဆန့်ထုတ်ပါ။ Airlift သည် သင်ရွေးချယ်သည့်နေရာတိုင်းကို ရွေ့လျားစေနိုင်သည်။
အကျယ် 71" အထိ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
မိမိနှစ်သက်ရာ ထိပ်ပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အနည်းဆုံး 45"အကျယ်မှ အများဆုံး 62.9"အထိ ချဲ့ပါ။
အားကောင်းသော လျှပ်စစ် Dual မော်တာများ
အစွမ်းထက်သော မော်တာနှစ်လုံးနှင့် ပိုမြင့်သော3ပိုင်း တယ်လီစကုပ်ခြေထောက်များဖြင့် သင့်စားပွဲကို အားစိုက်ထုတ်လိုက်ပါ။ မော်တာနှစ်လုံးသည် မော်တာတစ်ခုတည်းထက် အလေးချိန်ပိုမိုမြင့်မားသော ချိန်ညှိမှုကို ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ယခင်- Glass Top Modern Design Office Computer Adjustable Standing Desk
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော Standing Office Table ကို ထုတ်လုပ်ပါ။
ချိန်ညှိနိုင်သော Desk Frame
Electric Standing Desk Frame ၊
အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော စားပွဲဘောင်
PU Desktop Electric Height Adjustable Computer...
ချိန်ညှိနိုင်သော ကွန်ပျူတာ Stand up Desk Leg Hand Cra...
ကွန်ပြူတာ လက်ပ်တော့ စားပွဲထိုင် မတ်တပ် ချိန်ညှိနိုင်သော...
မော်တာနှစ်လုံးဆင့် လျှပ်စစ်အမြင့် ချိန်ညှိခြင်း...
Amazon အရောင်းရဆုံး Electric Adjustable Office C...
Glass Desktop Electric Lifting Table မှာ အသင့်ရပ်နေတဲ့...